Uyithakasele i-ICC eyobungqungqulu bomhlaba uDu Plessis – Bayede News
UKAPUTENI weqembu lekhilikithi lakuleli iProteas uFaf
Posted on 04/08/2019 04/08/2019 by Bayede-News
UFaf du Plessis
UKAPUTENI weqembu lekhilikithi lakuleli iProteas uFaf du Plessis uyakuthakasela ukuqala kweyobungqungqulu bomhlaba beze-ICC (ICC World Test Championship) eqale izolo ngomdlalo oqhubekayo ophakathi kompetha boMhlaba i-England ne-Australia odlalelwa e-Edgbaston.IProteas iyodlala umdlalo wayo wokuqala ekuhambeni ibhekana ne-India zimbili ngoLwezi wezi-2019 emidlalweni emithathu yezinsuku ezinhlanu (Test Match).Ukuqala kweyobungqungqulu bomhlaba beze-ICC kubonise izinguquko eziningi emdlalweni wezinsuku ezinhlanu.Amajezi abadlali asenezinombolo namagama ngemuva. Kuzoba nohlelo lwamaphuzu kulo mqhudelwano.
Uchungechunge lwemidlalo luzoba nemidlalo emibili kuya phezulu lube namaphuzu ali-120. Ukudlala ngokulingana kutholela iqembu amaphuzu angama-20.Umdlalo wamanqamu uyodlalelwa e-England ngoNhlangulana wezi-2021 emveni kwemidlalo engama-71. Amazwe ayingxenye yalo mqhudelwano iNingizimu Afrika, iBangladesh, iPakistan, i-India, i-England, i-Australia, iWest Indies, iNew Zealand neSri Lanka.Lo mqhudelwano omusha unikeza iqembu lakuleli ithuba lokuba ngompetha be-ICC World Test Championship emveni kokuphuma zibekwa kweyeNdebe YoMhlaba ebibanjelwe e-England ngenyanga edlule. Elakuleli lizoqala ngokubhekana neqembu elihamba phambili emhlabeni i-India ekuhambeni.
UDu Plessis uthi, “I-ICC World Test Championship into entsha futhi ethokozisayo ngale ndlela. Besilokhu sifisa ukuthi kube nokuthile esizokudlalela okunikeza umongo emdlalweni wezinsuku ezinhlanu.IProteas ibe nemidlalo emihle kakhulu ochungechungeni lwemidlalo eminyakeni eyedlule. Kusuka manje kuya phambili yonke imidlalo ibalulekile ngoba eminyakeni emibili kuzobe sekudlalwa umdlalo wamanqamu ekhaya lekhilikithi eLords e-England.”
Uqhube wathi, “Singabadlali siyilindele le midlalo yalo mqhudelwano omusha wemidlalo yezinsuku ezinhlanu.”IWorld Test Championship izoba iNdebe YoMlaba yomdlalo wezinsuku ezinhlanu, okusho ukuthi izofana neNdebe YoMhlaba yosuku olulodwa (ODI) neNdebe yoMhlaba ye-T20.Lo mqhudelwano uzodlalwa iminyaka emibili, amaqembu amabili aqhwakele phezulu kulogi ngoNhlangulana wezi-2021 azobhekana kowamanqamu ukuze kutholakale umpetha womhlaba.